Camping zvishongedzo fekitori - China Camping zvishongedzo Vagadziri, Vatengesi
Kana iwe uchifunga kuti unongoda tende uye chitofu chekudzika musasa kunze, kwete, kwete, zvishandiso zvekudzika musasa zvakakosha kuita kuti rwendo rwako rwekunze ruve rwakakwana, nyore uye risingakanganwike Kambani yedu, Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. Ive yakazvipira mukuvandudza uye kugadzira huni inopisa chitofu uye yekunze musasa accessories, iyo inosanganisa dhizaini, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi.
- Shandisa nemajecha echitofu aripo kana paunenge uchiisa jecha rechitofu mutende kana pekugara, mhinduro iri nyore yekupenya kupinza nepakati petende yetende.
- Yakagadzirwa nesilicone kuti idzivirire tembiricha yakakwira, inogadzira chisimbiso chakasimba chakakomberedza pombi, uye inopa kuchinjika
- Inowanikwa mune maviri mamodheru uye yakamisikidzwa nematanho kubvumira iyo nyore sizing, yakakodzera kune akasiyana zviitiko
- Stainless simbi mhete uye hex nzungu dzinobata Flashing Kit panzvimbo
- Kuramba kune ultraviolet mwaranzi, kutsemuka & mamiriro ekunze
Camping Stove Round Kettle Inokodzera Chimney
- Chengetedza mweya unotonhorera kunze: Yakagadzirwa kuti isimbise chimney kana moto uri 'kumhanya, kuitira kuti mhepo inotonhora igare kunze uye imba yako igare ichidziya.
- Tumira utsi kure: Zvakanaka pakuchengetedza mweya unotonhorera kuti ugone kuvhurwa zvirinyore kuti utsi hwakashata hutize.
- Batsira kudzora kusimba kwemoto wako: Kunyangwe iwe uchida kuti moto wako ubvise hurefu uye hwakasimba kana hwakagara-pfupi uye hunyoro, iwe unodzora mamiriro acho.
- Kudzora kwemhepo: Inoenderana nemasitofu anotakurika musasa, kugadzirisa mweya uye kupisa mwero muchitofu chako.
- Yakasimba sevhisi: Iyi flue damper inoumbwa nesimbi simbi ine yakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka, yakanaka munzvimbo dzakashata dzekunze.
- Yakatemwa nematanho kubvumira kuti ive nyore sizing, yakakodzera kune akasiyana zviitiko
- Inokodzera chitofu Models: S03-1, S03-2, S03-3, S03-4, FO-05, FO-07, nezvimwe.
- Yakasimba Tsika: Yakagadzirwa nemucheka unogara wakasimba uye mamiriro ekunze-asingagadzike, inopa chengetedzo kune yako yekupisa chitofu.
- Yakawanda-homwe dhizaini: Yakashongedzerwa ne2 dhayeti yetambo yekutakura zviri nyore kutakura mafuta ekuwedzera, zvakare inouya nehomwe dzemukati dzemidziyo.
- ZveZvako Zvekuchengetedza: Shandisa iri rinoshanda bhegi rekuchengetedza nekuchengetedza chitofu chako, uye zviri nyore kutakura.
- Hunhu Guarantee: Wako 100% kugutsikana kwagara kuri kwedu kwekutanga kukoshesa. Iwe haugone kuwana yakasimba chigadzirwa.
Chitofu-chakaringana chisina kupisa Mat cheKambi
- Yakakwira Hunhu: Yakagadzirwa imwe chete girazi fiber uye maviri akaturikidzana esilicone kupfeka. Ose ari mairi Anodzivirira kupisa uye Asingatsike Zvinhu, ine yakanyanya kupisa moto, anti-permeation basa.
- Kushanda: Yakaiswa pasi pegomba remoto kana grill, inogona kudzivirira kuputika kwemazimbe kana girizi rinodonha kubva mukukuvadza huni, huni, huswa, nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza gomba remoto kana grill.
- Yakachengeteka kushandisa：Chikafu-giredhi resilicone hachina chete basa remoto uye kupisa kupisa, asi zvakare chinodzivirira mafuta kubva pakupinda muvhu.
- Kudzikamisa: 4 isina simbi kumucheto grommets yakagadzirirwa kugadzirisa bonde pasi pasi pemamiriro emhepo akasimba.
- Yambiro: Chengetedza chinhambwe chemasendimita gumi pakati pemubhedha nepasi pegomba remoto.
Steel Spark Kusungwa KweChimney
- Inoenderana nemasitofu edu emisasa
- Yakagadzirwa kubva ku304 simbi isina chinhu
- 60 mm dhayamita, 300 mm kureba
- Zvinongedzo zvekubatanidza zvemitsara yemukomana
- Dzivirira kupenya kubva pakubhururuka
304 Stainless Simbi BBQ Grill
- Yakatsiga uye inotakurika: Yakakwira mhando yezvinhu inogadzira ekunze grills neanoputa ane akanaka mutoro-kutakura kugona.
- Yakasimba sevhisi: Yakagadzirwa yakasimba uye yakasimba 304 simbi isina simbi kabati, yakasimba kune yekunze musasa uye musango.
- Nyore Kuchenesa: 304 Stainless Simbi inobatsira iyo grill kuramba oxidation uye ngura. Ingo pukuta matanda netauro uye udzokere shure mukati meiyo nyore kutakura chubhu.
- Hapana gungano, rakanyanya nyore.
- Diki saizi: Zviri nyore kuchengeta mubhegi rako.
- Nyore Ungana: Chero bedzi tsvimbo dzekutanga uye dzekupedzisira pane iyo grill dzikaiswa mumisasa yehuni kupisa chitofu chakasimba, tsvimbo dzepakati dzinenge dzakachengeteka uye hadzizungunuke.
Kunze Kwehuni Kunopisa, Bindu Kubika Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Stainless simbi chitofu, Tende Wood Inopisa Chitofu, Musasa Wood Burner,